Amir Khalid Bin Farhan Al Saud : Waxaa Dhici Doona Afgambi Fudud Oo Xilka Lagaga Tuuro Salmaan Iyo Wiilkiisa – Heemaal News Network
Dalka Swedan Oo Marti Galiyey Wadahadal U Bilaabmay Kooxaha Ku Dagaalamaya Dalka Yaman
Sucuudi Carabiya Oo Maanta Su’aalo Laga Waydiin Doono Herkeeda Xuquuqda Aadanaha.
Dowladda Sucuudi Carabiya ayaa lagu wadaa in maanta magaalada Geneva ay guddi Qaramada Midoobay ah hortiisa ku difaaci doonto heerkeeda xuquuqda aadanaha. Kulanka dib u geesta oo ah mid joogta ah ayaa waxaa qasab ah […]
Dawlada Sacuudiga Oo Qiratay In La Sii Qorsheeyay Dilkii Saxafi Jamaal Khashoggi.
Dowladda Sacuudiga ayaa mar kale beddeshay macluumaadkii ay ka bixin jirtay dilka suxufi Jamal Khashoggi loogu gaystay gudaha qunsuliyadda Riyadh ee Istanbul, waxaana markan qiratay inuu dilkaasi ahaa mid hore loo sii qorsheeyey. Bayaan maanta […]
Koox senataro Mareykan ah ayaa ku cadaadinaya madaxweyne Donald Trump inuu baaritaan ku sameeyo maqnaanshaha suxufiga Sacuudiga, taasi oo hogaamin karta cunaqabateyn la saaro saraakiisha iyo hay’adaha Sacuudiga. Warqad ay madaxweyne Trump u direen arbacadii, […]